साहित्यकार अल्बर्ट कामु र उनका रचना - Samadhan News
साहित्यकार अल्बर्ट कामु र उनका रचना
समाधान संवाददाता २०७७ वैशाख २३ गते १०:३०
‘माानिसमा घृणाका कुराहरु भन्दा प्रशंसनीय गुणहरु धेरै मात्रामा हुन्छन्’ यो वाणी प्रस्तुत गर्ने महान् व्यक्ति बिसौं शताब्दीका चिन्तक, लेखक, उपन्यासकार, निबन्धकार साथै दार्शनिक व्यक्तित्व अल्बर्ट कामु हुन् । उनी नोबेल पुरस्कार विजेता पनि हुन् । मानवीय चेतनामा रहेको विसंगतिलाई केलाउन सफल भएको भन्दै सन् १९५७ मा नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित भएका थिए ।
आफ्नो चिन्तन र विचारको माध्यमबाट धार्मिक र आध्यात्मिक चेतना प्रदान गर्ने यिनले मानवतावादी जीवन दर्शन साथै मानवका सुख/दुःख, आरोह/अवरोहलाई अभिव्यक्त गरेका छन् । यिनले आफ्नोे दर्शनमा मानवीय एकता, कर्तव्य, जीवनका निस्सारता र विवशता साथै कष्टपूर्ण जीवन र मृत्युका बारेमा लेखेका छन् । विसंगतिवादी दर्शनका प्रवर्तक यिनले ‘द मिथ अफ सिसिफस’ नामक निबन्ध मार्फत सर्वप्रथम विसंगतिवादी दर्शनको पुष्ट्याइँ मात्र गरेका छैनन् कि यसलाई विश्वव्यापी समेत बनाएका छन् । यस दर्शनको विकासमा आफ्नोे सम्पूर्ण जीवनको ऊर्जालाई समर्पित गरेका यिनले मानिसको जीवनको सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको आत्महत्याको कारण र समाधानका उपायलाई जुन ढंगबाट जन समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् साहेद अरु दार्शनिक तथा साहित्कारले गरेका छैनन् ।
अल्बर्ट कामुको जन्म ७ नोभेम्बर १९१३ मा अल्जेरियाको मोन्डोभियाको एउटा गरिब परिवारमा भएको थियो । उनी श्रमिकका छोरा थिए । यिनको बाल्यकाल अल्जेरियामा नै बित्यो । त्यहीँ नै उनले बाल्यकालको शिक्षा पूरा गरे । प्रथम विश्वयुद्धमा आफ्नो बुबालाई गुमाउनुको पीडा यिनले ठूलै व्यहोरे । सानैदेखि खेलकुदमा रुचि राख्ने खासगरी फुटबललाई त्यागेर आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान अध्ययन र चिन्तनमा नै लगाए । यसैक्रममा उनले अफ्रिकीहरुको सामाजिक अवस्था र जीवनशैली, ग्रिसेली दर्शन, क्रिस्चियन धर्मको साथै अल्जेरिया र युरोपेली संस्कृतिप्रति गहिरो अध्ययन र बहस प्रारम्भ गर्न थाले ।
सन् १९३६ मा अल्जियर्स विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि केही समय पत्रकार, नाट्यमण्डलीको सदस्यको रुपमा रहेर काम गरे । विवाह र वैवाहिक संस्थाप्रतिको विरुद्धमा रहे पनि सन् १९३४ मा सिमोन हडमानसँगको वैवाहिक जीवन, पियानोवादक तथा गणितिज्ञसँगको दोस्रो विवाह र उनीबाट जन्मेका क्याथरिन र जिन २ सन्तानको बावजुद सिमोन द परेज बुवासँगको सम्बन्ध सुखद् नबनेपछि उनले तेस्रो वैवाहिक सम्बन्ध फ्रान्सिन फाउडरसँग गाँसे । तर पनि समग्ररुपमा उनको वैवाहिक जीवन त्यति सहज, सुखद् र सफल हुन सकेन ।
युरोप र अल्जेरियामा भएको रैथानेहरु बीचको असमानता विरुद्धको युद्धलाई देखेर सन् १९३५ को वसन्तमा फ्रान्सेली कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ दिए । उनले एक्सेटिजमको रुप साम्यवादमा देख्न सकिन्छ भनेर विद्यार्थी एकता, मजदुर एकता, हंगेरी क्रान्ति र पोल्यान्डमा भएको मजदुर विद्रोहलाई समेत समर्थन गर्न पुगेका थिए ।
स्टालिनप्रतिको सात्र्रको धारणालाई लिएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई परित्याग गर्न पुगे । वैचारिक असहमतिको कारणले गर्दा उनले सात्र्रको अस्तित्ववादी चिन्तनप्रति असहमत हुँदै उनी नयाँ दर्शन र चिन्तनको खोजतर्फ लागे । यसरी उनले विभिन्न उतार चढाब र मतभेद पश्चात् नयाँ दर्शनको सृजना गरे जसको परिणाम विसंगतिवाद थियो । कामु र सात्र्रको मतभेदको कारणले त्यसबेलाको चर्चित पत्रिका कोम्ब्याट समेत बन्द भएको पाइन्छ ।
जब मानिसले जिउने कुनै ठोस आधार देख्दैन तब ऊसँग आत्महत्या सिवाय अर्को विकल्प हुँदैन अर्थात् आत्महत्यालाई नै स्वीकार गर्दछ । किनकि उसले जीवनलाई अत्यन्त जटिल र बोझिलो ठान्दछ । उसले लिने यस्तो निर्णय १ सचेत र सजग कदम हुनुको साथै ऊसँग अन्य कुनै विकल्प नै हँुदैन ।
कामुका २ दर्जनभन्दा बढी कृति प्रकाशित छन् । तीमध्ये द रङ साइड एड द राइट साइड, नेसेस, द स्ट््रेन्जर (द आउट साइडर), द प्लेग, द रिबेल, द फल, द मिथ अफ सिसियस निबन्ध, द फस्ट म्यान आदि उनका प्रसिद्ध कृतिहरु हुन् । सबै पुस्तकहरु उत्कृष्टताको सूचीमा रहे तापनि विश्वसमक्ष उनलाई परिचित गराउनमा द प्लेग, द स्ट््ेरन्जर (द आउट साइडर) र मिथ अफ सिसियसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । कामुका अधिकांश पुस्तकहरुमा मानव जीवनका निस्सारता, शून्यता र व्यर्थताहरुलाई गम्भीर रुपमा विश्लेषण गरिएको देखिन्छ । यिनको पहिलो निबन्ध मार्फत् आत्महत्या १ सामाजिक र कानुनी दुर्घटना बन्छ तर त्यो एक नितान्त व्यक्तिगत मामला हो । मानिसहरु जति तीव्र जोडले बाँच्न चाहन्छन् त्यति नै भित्री र तीव्र रुपबाट मर्न पनि चाहन्छन् । यो नै आम मानिसको जीवनप्रतिको धारणालाई देखाएका छन् ।
कामुले मानिसमा आत्महत्याको ख्याल दिलको गहिरो तलाउबाट उत्पन्न हुने कुरा बताएका छन् । बानी बसिसकेको जीवनलाई चलाउनको लागि उसको अन्तर्आत्मामा उब्जेको आत्महत्याले मात्र हलचल ल्याउन सक्छ । जब मानिसले जिउने कुनै ठोस आधार देख्दैन तब ऊसँग आत्महत्या सिवाय अर्को विकल्प हुँदैन अर्थात् आत्महत्यालाई नै स्वीकार गर्दछ । किनकि उसले जीवनलाई अत्यन्त जटिल र बोझिलो ठान्दछ । उसले लिने यस्तो निर्णय १ सचेत र सजग कदम हुनुको साथै ऊसँग अन्य कुनै विकल्प नै हुँदैन । मानिसले यो कुरा बुझ्दैन कि आफ्नोे जीवन समाप्त गर्नु उसका लागि मनको निर्णय मात्र नभई शरीरको समेत सहभागिता यसमा रहेको हुन्छ । शरीर बाँच्न चाहन्छ तर जीवन भने अविरल मृत्युतर्फ दौडिरहेको हुन्छ । जीवन बाँच्न लायक छैन भने किन बाँच्ने ? भन्ने अप्रत्यक्ष रुपमा जीवनलाई किन समाप्त नगर्ने ? भन्ने निष्कर्ष आत्महत्याको सन्दर्भमा उठाएका छन् ।
सन् १९४२ मा प्रकाशित उपन्यास द स्ट्रेन्जरमा यानी द आउट साइडरमा आफूलाई जन्म दिने आमाको मृत्यु र अन्तिम विदाइमा समेत कुनै मानवीय संवेगहरु प्रस्तुत नगर्नेे, भगवानमाथि विश्वास नजाउने र मृत्युसँग कुनै भय नभएको साथै अमानवीय कार्य गर्ने फरक किसिमको पात्रको उपस्थितिमा संसार पूर्ण अर्थहीन छ भन्ने कुरा देखाएका छन् । साथै जसले अन्तिम सत्यको रुपमा मृत्युलाई देखेको र बुझेको छ उसलाई मानवीय संवेगहरुले प्रभाव पार्न सक्दैन । उसको निर्णयमा बाँच्न पाउने अवसरलाई समेत अस्वीकार गरी हाँसी हाँसी मृत्युलाई स्वीकार गर्न मानिसहरु पछि पर्दैन भन्ने विचार दिएका छन् ।
आत्मकथात्मक शैलीमा लेखिएको यो उपन्यासको कथा एउटा यस्तो पात्रको वरिपरि घुमेको हुन्छ जो मानिस भएर मानिस बन्न सकेको देखिदैन, समाजमा जन्मेर, समाजको मुल्य र मान्यतासँग परिचित हुन सक्दैन । मानिससँग बसेर मानिसका संवेगहरुलाई बुझ्दैन । यस्तै एकाकीपन, उक्साहट, विवशता र अनास्थाको निस्पट अन्धकार बाटोबाट वास्तविक जीवनको फराकिलो व्याकरणलाई खोज्ने प्रयास गर्दछ, तर उसले प्राप्त गर्न सक्दैन ।
कामुले आफ्नोे उमेरको २७ औं वसन्त पार पश्चात लेखेको महत्वपूर्ण निबन्धसंग्रह द मिथ अफ सिसिफस सन् १९४२ मा प्रकाशित भएकोे हो । यो पुस्तक विंसगतिवादी दर्शनको धरातलमा विसंगतिपूर्ण मानवीय जीवनका विविध आयाममाथि केस्रा केस्रा केलाइएको छ । यो पुस्तक विश्व साहित्यको आँगनमा विसंगतिवादी दार्शनिक चिन्तनको रुपमा यसले अद्धितीय स्थान बनाएको छ । यस पुस्तकले हामीले भन्ने गरेका मानव जीवनमा हुने मुल्यस्खलनको सजिव चित्रण गराएका छन् । यस पुस्तकमा कामुले मानवीय व्यर्थता र गरिमालाई उद्घोष गरेका छन् । यसमा कामुले मानवीय विसंगति, व्यर्थता, तर्क विर्तक आदि जस्ता मानवीय जीवनको अकल्पनीय घटनाहरु मानिसमा मात्र घट्दछ भन्ने विचारलाई बडो अर्थपूर्ण शैलीमा अर्थाएका छन् ।
पूरा सृष्टिमा मानिस मात्र त्यस्तो प्राणी हो, जो आफुलाई आफैले मार्दछ तर बाँकी सारा प्राणी आपैm मर्छन वा अरुलाई मार्छन् । वास्तवमा यस्तै विंसगतिपूर्ण घटनालाई विचारशील मानिसहरुले चिन्तन र मनन गर्न जरुरी छ । द मिथ अफ सिसिफसको भूमिकामा कामुले लेखेका छन् यो स्वभामिक र आवश्यक छ कि, हामी जीवनको अर्थ र गहिराइका बारेमा चिन्तन गरौँ । किनकि आत्महत्याको प्रश्नको सामना गर्न पनि जरुरी छ । हामी ईश्वरप्रति आस्था र विश्वास गरौं वा नगरौं, तर मानव जीवनमा आत्महत्या योग्य छैन । जीवन १ आमन्त्रण हो र बाँच्नु सिर्जना हो ।
द मिथ अफ सिसिफसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र चर्चित लेख नै सिसिफस हो । पौराणिक कालमा ग्रीसका गीर्वाणबाट श्राप प्राप्त सिसिफसले एउटा ढुंगालाई गुडाएर पहाडको चुचुरामा पूराउने कार्य निकै कष्टकर, निरर्थक र आशाविहीन कार्य हो । सिसिफस एक विसंगत नायक तथा विषम परिस्थितिमा नयाँ दिशा खोज्ने मानिस पनि हो भन्दै यिनले एउटा व्यर्थ श्रमले मानवीय अजेय स्वरुपको धारण गर्न सक्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । यिनले मानवीय गरिमालाई वढो कलात्मक ढंग र मार्मिक शैलीमा उठाएका छन् ।
द प्लेग कामुको सन् १९४७ मा प्रकाशित विश्व चर्चित र विसंगतिवादलाई पुष्टि गर्ने कालजयी दार्शनिक उपन्यास हो । उक्त उपन्यासमा कामुले तत्कालीन समयमा फ्रान्सस्थित अल्जेरियाको ओरान सहरमा पैmलिएको प्लेग महामारी रोगको विरुद्धमा गरिएको जीवन र मृत्युको संघर्ष तथा मानवीय विवशतालाई संवेदनशीलताका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । उनले मृत्यु, विवशता र दःुख मानवीय कमी कमजोरीहरु हुन् र यी ईश्वरबाट प्राप्त श्रापहरु होइनन् भन्ने कुरा स्वयं ईश्वरका दूतलाई समेत विश्वास दिलाउन सफल भएका छन् ।
दुःख, कष्ट र संकटको बेला भाग्ने होइन बरु अरुलाई बचाउने र सहयोग प्रदान गर्ने अभियानमा मानव जोडिनुपर्छ यही नै मानवको कर्तव्य हो, भनी मानव र मानवताको पक्षमा आफ्नो पात्रहरुलाई उपन्यासमा उभ्याएका छन् भने आफू स्वयं यो अभियानमा कट्टर रुपमा उभिएका छन् । वर्तमान विश्वमा देखिएको कोरोना भाइरसका विरुद्धमा विश्व लडिरहँदा कामुद्धारा लेखिएको यो पुस्तकको सन्दर्भ अझै बढेर गएको देखिन्छ ।
कामुको सन् १९५१ मा प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तक द विद्रोही मा यिनले आतंक र क्रुरताकाे बलमा स्थापना गरिएको राज्य र राज्य सञ्चालनको हिस्रंक शैलीले न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने विचार प्रकट गरेका छन् । उक्त पुस्तक मार्फत कामुले अझ जोड दिएर भन्छन्, ‘विद्रोह जो अन्यायपूर्ण र विभेदकारी राज्य व्यवस्थालाई विस्थपित गरेर समानतामूलक र न्यायपूर्ण राज्य स्थापनाको गर्नको लागि गरिएको हुन्छ ।’
जब विद्रोहले हिंसालाई केन्द्रमा राखेर त्यसैमा आधारित सत्ता स्थापना गर्छ भने साविकको अवस्था भन्दा झन् कठोर अन्याय र चर्को दमनरुपी राज्यमा परिणत हुन्छ । जसलाई हटाउनको लागि विद्रोहको आवश्यक पर्छ फलतः विद्रोह गरिएको हुन्छ । उनले विद्रोहलाई मानवीय चेतनाको जागरण गराउने माध्यमका रुपमा लिएका छन् भने अर्को तर्फ विद्रोहको नाममा गरिएको मानवीय दमन र अपहरणलाई पूर्णत अस्विकार गरेका छन् । उनले आफु अल्जेरियन भएर पनि अल्जेरियाको स्वतन्त्रतामा सहभागी नभएर आलोचनाका पात्र वन्न पुगेका थिए ।
भनिन्छ, कामुले आफ्नोे दोस्रो श्रीमती फ्रान्किनको प्रतीकात्मक रुपमा द फलको सृजना गरेका हुन् । । सन् १९५६ मा प्रकाशित ‘द फल’ मा एक जना वकिलको जीवनलाई प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा मानवीय पीडामा डुबिरहेकी महिलाको उद्धार गर्न नसक्दा वकिललाई आइपरेको संकटलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
सन् १९६० मा एक कार दुर्घटनामा कामुको मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युको साथ पहिलो मानिस नामक उपन्यासको अप्रकाशित पाण्डुलिपि उक्त मृत्युसँगै थियो । यो आत्माकथात्मक रुपमा लेखिएको उपन्यास उनको मृत्यु पश्चात प्रकाशित गरिएको थियो । यस उपन्यासमा आफ्नोे हराएको पिताको खोजीमा आशाका आँखाहरुको माध्यमबाट एउटा पुत्रले विताएका प्रतीतहरुलाई उजागर गरेका छन् । जुन पितालाई खोज्ने क्रममा समाधिमा पुग्दा उसले त्यहाँ केही पाउँदैन । केवल २९ वर्ष अगाडि देशको लागि लड्दा लड्दै प्राण वलिदान गरेको थियो भन्ने कुरा जान्दछ ।
यो उपन्यासमा पहिला को ? पिता, पुत्र ? वा अल्ेजेरिया निवासी, फ्रान्सेली निवासी या अन्य को हो ? तर त्यो निर्धन मानिसको मृत्युको साथ सबै नाम निशान मेटिन्छ । केही बाँकी छैन् । यो उपन्यासले हामी पाठकलाई पनि उत्तर खोज्नको लागि सदैव प्रेरित गर्दछ ।
वर्तमान समयमा अल्वर्ट कामुको विचारको महत्वपूर्ण असर विश्व साहित्यको बगँैचामा रहेको छ । विशेष गरी कामुको चिन्तनलाई तीन मुख्य विचारधारामा देख्न सकिन्छ । प्रथम, अर्थहीनता (एब्सर्डिटी), दोस्रो, मानवीय संवेदना एवम् मृत्युको सत्यता र तेस्रो पहिलो र दोस्रो अवस्थाको बीच अर्थात भय, डर र त्रासको अवस्थाको बिचमा उभिएर मानव सदैव जीवनको आनन्द र खुशीको अदम्य खोज गर्नु छ भन्ने सन्दर्भ महान साहित्यकार अल्वर्ट कामु विश्व साहित्यको उर्वर भूमिमा आफ्नो सुन्दर र सुगन्धित फुलहरु रोपेर गएका छन । जुन कामुको साहित्यको विशेषता पनि हो । यही साहित्यिक विशेषताका वास्नाले आज विश्व साहित्य गौरवान्वित र ओजिलो भएको छ । साथै वर्तमान सन्र्दभमा विश्वबाट मानवता, सौहार्दता र समानता जस्ता मानवीय भावनाका अंगहरुमा मानवद्धारा नै चोट पूराउँदै आएको अवस्था कामुद्धारा व्यक्त यो भनाइले विश्वका मानिसहरु बिच आपसी मेलमिलाप, सहयोग र समझदारीको भावनालाई अझ नजिक बनाउने विश्वास लिइएको छ । ‘मेरो अगाडि नहिँड, म पछ्याउन नसकूँला, मेरो पछाडि नहिँड म नेतृत्व गर्न नसकूँला, बस म सँगै हिँड, साथी बन ।’